कैलालीबाट युवकको बाइकमा लिफ्ट मागेर नेपालगन्जको लागि हिडेकी सुन्दर नर्सको जिवनमा सोच्नै नसकिने घटना घट्यो ! – AB Sansar
कैलालीबाट युवकको बाइकमा लिफ्ट मागेर नेपालगन्जको लागि हिडेकी सुन्दर नर्सको जिवनमा सोच्नै नसकिने घटना घट्यो !
October 21, 2020 adminLeaveaComment on कैलालीबाट युवकको बाइकमा लिफ्ट मागेर नेपालगन्जको लागि हिडेकी सुन्दर नर्सको जिवनमा सोच्नै नसकिने घटना घट्यो !
चक्र खडायत – मलाई बिहानै ८/९ बजे नै नेपालगन्ज पुग्नु थियो, बिहानै साढे ५ बजे तिर हतारमा उठियो। मम्मीलाई नि उठाएर आफ्नो लागि खाजा बनाउन लगाए किनकी कोरोनाको समय छ, सबै ठाउँमा खाना नास्ता खाने जस्तो माहोल छैन।फ्रेस भएँ। मम्मीले पकाउनु भएको नास्ता खाएँ, झोला तयार पारे। यति गरुन्जेल ६ बजिसकेको थियो। मम्मीलाई हतारमा ल अब हिडेँ भनेर बाइक निकालेँ। एउटा काँधमा झोला भिरेँ, बाइक स्टार्ट गरेँ। *फाइल तस्बिर गुगलबाट साभार * ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
जीउ सिरिङ्ग भयो, अँखाबाट कतिखेर आँसु आयो पत्तो नै भएन। अरु धेरै केही सोध्न मन लागेन। उनकी साथीले अर्को म्यासेज गरिन्- तपाई को? मैले म्यासेज सीन गरेर छोडेँ, उत्तर मसँग थियो तर दिनै मन लागेन।जिवनमा धेरै मान्छेलाई लिफ्ट दिइयो
दशैं नजिकिदै गर्दा एकाबिहानै देशैभर का नागरिकहरुलाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो महत्वपूर्ण सूचना : सबैले पढ्नैपर्ने !
एमसिए नेपालका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश यादवको कोरोनाबाट नि’धन
November 25, 2020 santosh
सियोनाको लागी २५ करोड नै किन ? उनका का बाबाले खुलासा गरे आज यस्तो राज (भिडियो हेर्नुहोस)